GAROWE- Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 28-Jun-2016 kaga qayb galay Masaajidka Al-Huda ee magaalada Garoowe Munaasab lagu maamusayey xiritaanka Tartanta Qur’aanka Kariimka ah, kaas oo u dhexeeyey degmooyinka Puntland.
Sidoo kale Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka socda labada gole ee dawladda, guddiga garsoorka Tartanka, ardaydii ku tartamaysey qaybaha kala duwan ee Jusaska Qur’aanka, maal-geliyayaashii tartanka, Isimo iyo dadweyne kale.
Ardaygii ku guuleystey tartanka Soddonka Jus ee Qur’aanka Kariimka ah oo lagu magcaabo Ibraahim Maxamed Maxamuud kuna tartamayey magaca madarasada Daarul-Qur’aan ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa Abaal-marin loo siiyey Gaari nooca raaxada ah, waxaana ardaygaasi Furaha Gaadhiga guddoon siiyey Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku macneeyey kasoo qayb-galkiisa Munaasabadda xiritaanka tartanka Qur’aanka Kariimka ka ah in ay tahay qayb ka mid ah waajibaadka dawladdu ay u hayso bulshadeeda.
“sharaf bay nootahay in aanu idin kala soo qayb galno munaasabaddan, waana waajib dawli ah, waajibka koowaad ee dawladdu waa in ay dadka ilaaliso diintiisana ku ilaaliso,” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu xusay sida ay lagama maarmaanka u tahay in ubadka inta ay yar-yar yihiin lagu ababiyo diinta islaamka si’ ay uga badbaadaan kooxaha sharwada yaasha ah ee diinta islaamka sida khaldan dadka u fahamsiiya, isagoona tusaale u soo qaatay caruur yaryar oo aad u tiro badan oo lagu soo qabtay dagaalkii lagu soo afjarayey duullaankii kooxada Shabaab kusoo qaaday Puntland.
Sannad kasta tobanka dambe ee bisha Ramadan ayaa la qabta tartan ku aadan bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana ku loollama dhalinyaro yar yar oo kala matasha qaybo kamid ah gobollada Puntland.